बुंग करुणामयको रथ आज तानिंदै , बिहानैदेखि रथ राखिएको क्षेत्र प्रहरीको घेरामा ! - Subhay Postबुंग करुणामयको रथ आज तानिंदै , बिहानैदेखि रथ राखिएको क्षेत्र प्रहरीको घेरामा ! - Subhay Post
बुंग करुणामयको रथ आज तानिंदै , बिहानैदेखि रथ राखिएको क्षेत्र प्रहरीको घेरामा !
Photo Rakesh Khadgi
सुभाय् संवाददाताSeptember 6, 2020 मा प्रकाशित (१ हफ्ता अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ५ मिनेट
सुभाय् पोस्ट सम्बादाता , ललितपुर / आज भाद्र २१ आइतबार ललितपुरमा प्रतिकात्मक रुपमा भए पनि बुंग करुणामय रातो मच्छिन्द्र नाथको रथ यात्रा गरिने कार्यक्रम रहेको छ । कोरोना महामारीका कारण पटक पटक रोकेर अन्योलमा परेको यस यात्राको निम्ति चौतर्फी दवाब बढेपछि गत भाद्र १८ गते विधिपूर्वक क्षमा पुजा गर्ने , रथ तान्ने र समापन गरि बुंगमती फर्काइने कार्यक्रम तय भएको थियो । यस तालिका अनुसार आज विधिपूर्वक रथ तानिने कार्यक्रम रहेको छ ।
उपत्यकामा सहकालका देवताको रूपमा पुजिने यस बुंग करुणामय समग्र उपत्यकाबासीको गहिरो आस्था रहेको देवताको रूपमा लिइन्छ ।
यसैैबीच आज रथ तानिने दिन पाटनमा रथ राखिएको क्षेत्र पुल्चोक गाबहाल , नटोल लागा पूर्ण रूपमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरि आवत जावत बिहानैदेखि गर्न दिइएको छैन। यातायात प्रवेश गर्न दिइएको छैन । सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति देखिन्छ । त्यस क्षेत्रलाई सुरक्षाकर्मीले पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिइएको अवस्थामा रहेकोे देखिन्छ ।
बुंगद्यो जात्रा व्यवस्थापन पुच:ले प्रकाशित गरेको कार्यक्रम अनुसार भाद्र १८ गते क्षमा पूजा भइ सकेको छ ।
आज भाद्र २१ गते रथ तानिने छ । रथ पुल्चोककै सोर्‍हखुट्टे पाटीसम्म प्रतीकात्मक रुपमा तानिने कार्यक्रम रहेको छ । जात्रा व्ययवस्थापन पुुुच:का अनुसार कोरोना संकटको बेला सीमित सरोकारवाला व्यक्तिमात्र सहभागी गराई रथ यात्रा र अन्य विधीहरु गरिनेछन् । विभिन्न टोलका जात्रा व्यवस्थापन समितिबाट कूल १६० जना रथ तान्न खटिनेछन् ।
यसका निम्ति माक्स पन्जा स्यानेटाइजर भाइजरको व्यवस्था गरिएको छ ।
रथ तान्नेहरुको पहिचानका निम्ति टिसर्टको व्यवस्था गरिएको छ ।
जात्रामा जम्मा ५ जोर धिमे बाजालाई सहभागी गराइनेछ । त्यसैगरी २ जोर नायखिं बाजा र का: बाजा बजाउन ४ जना सहभागी गराइने छ ।
त्यसैगरी भोलि भाद्र २२ गते परम्परागत चलन अनुसार भुज्या गरिनेछ र भाद्र २६ गते बुंग करुणामयलाई बुंगमती फर्काइने छ ।
यसरी जात्रा समापन हुनेछ ।
महामारीका बेला जात्राका निम्ति आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउने सबै कुरा व्यवस्थापन समितिले जारी गरिसकेको छ ।
मूल कुरा भाद्र १८ गते रथ तान्ने क्रममा भएको झडप र त्यसपछि प्रहरीले पक्राउ गरिएका स्थानीय आस्थावान युवाहरू तथा सांस्कृतिक अभियन्ताहरुलाई अझै रिहा गारिएको छैन। जात्रा व्यवस्थापन समिति सम्मीलित ललितपुरका जात्रा सरोकारवालाहरु सहितको २० संघ सस्था , नेवा: देय् दबू , वर्ल्ड नेवा: अर्गनाइजेसन लगायत विभिन्न संघ संस्थाले हिरासतमा लिइएका युवाहरूलाई तुरुन्त रिहा गर्न विज्ञप्ति जारी भएको अवस्था छ ।
हिरासतमा लिइएका व्यक्तिहरुलाई शिघ्र रिहा गरि शान्तिपूर्ण रुपमा करुणाका देवता बुंग करुणामय रातो मच्छिन्द्र नाथको जात्रा विधिपूर्वक सम्पन्न गरिनेछ भनी सबैले आशा गरेका छन् ।
कोरोनाको महामारी बिच स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण पालना गरेर हुन लागेको यस रथ यात्राले आपसी भाइचारा कायम राख्दै देशमा फैलिरहेको महामारीको भयबाट मुक्त हुन मद्दत गर्नेछ भनी आस्थावान् भक्तजनहरुले गहिरो आशा व्यक्त गरेका छन् ।